UNICOLAS CAGE UVULA MALUNGA NEZICWANGCISO ZOMHLALA-PHANTSI KWISHISHINI LEFILIMU LASEHOLLYWOOD - HOLLYWOOD
UNicolas Cage uvula malunga nezicwangciso zomhlala-phantsi kwishishini lefilimu laseHollywood
I-Hollywood persona, uNicolas Cage kungekudala kudala waveza kudliwanondlebe ukuba akazukuthatha umhlala-phantsi kurhwebo lweemovie nangaliphi na ixesha ngokukhawuleza. Kudliwanondlebe kunye Ukuzonwabisa ngeveki , ukongeza wenza izinto ezicacileyo kwimovie yakhe ihlaziyiwe, Amabanjwa aseGhostland . Ngaphandle kweCage, imovie inokude ibenenkwenkwezi uSofia Boutella kunye noBill Moseley.
UNicolas Cage utyhile kudliwanondlebe ukuba akacwangcisi ukuthatha umhlala phantsi kubuhlobo bemovie nangaliphi na ixesha ngokukhawuleza. Xa wayeceliwe malunga nokuthatha ikhefu emva kweefilimu zakhe ezimbalwa ezalandelayo wathetha ngaleyo into engeyiyo nomnqweno malunga nebinzana elithi 'umhlala phantsi'. Wayeyaziwa njengomsebenzi wakhe kwi-cinema 'ingelosi yakhe' kwaye wathetha ngento yokuba uyafuna.
UNicolas Cage kwizicwangciso zomhlala-phantsi kurhwebo lweHollywood
Umlingisi we-Ghost Rider ongezelelweyo wathetha malunga nokuba uyakholelwa ukuba usempilweni ngakumbi xa esebenza, kwaye nomsebenzi wakhe umnika indawo yokuzazisa. Uqhubeke nokubhengeza ukuba 'ngekhe' uzokuthabatha umhlala phantsi. Nangona kunjalo, umdlali weqonga wathetha malunga nokuba uza kuthatha ixesha elithile ukuze ahlaziye kwakhona.
Emva Amabanjwa aseGhostland, umdlali weqonga uza kubonakala ngokukhawuleza kwi Ubunzima obunganyamezelekiyo beTalente enkulu. Kwimuvi ezayo, uCage uzakudlala 'imodeli ene-neurotic kakhulu, enexhala. Ibali liya kujikeleza umlingiswa weCage, owamkela isindululo se-USD 1 yezigidi ukuze aqhubeke kumsitho we-superfans. I-superfan iya kwenziwa nguPedro Pascal. Kudliwanondlebe kunye Umhlanganisi , UCage wavuma ukuba akasoze abukele imovie ngokwakhe, nangona engumvelisi wefilimu. Wathetha ngento yokuba umphathi wakhe, onokuba ngomnye wabavelisi abaninzi bemovie, wamazisa ukuba uyonwabile. Umboniso bhanyabhanya sele uza kuboniswa ngo-Epreli olandelayo yr.
Amabanjwa aseGhostland yayiyeyona bhanyabhanya ihlaziyiweyo kaNicolas Cage, eyathenga inkulumbuso yayo yehlabathi kwi-Sundance Film Festival ekuqaleni kwale yr. Iyelenqe lomdlalo bhanyabhanya lijikeleza isalamane, othunyelweyo ukuhlangula umzukulwana werhuluneli, owanyamalala eGhostland. Umboniso bhanyabhanya kunye neCage, kunye noSofia Boutella kunye noBill Moseley sele befumana izincomo ezinethemba ukuza kuthi ga ngoku.
Izigaba: Inetflix Amazon-Prime Umqala
UKim Kardashian akazange aluphumelele uviwo lwe-1 yoNyaka yoMfundi
Ityala livaliwe! U-Kim Kardashian utyhile ukuba akakhange aye kwiimviwo zakhe zokuqala zokufunda zomfundi kwiinyanga ezili-12 kwikliphu entsha kraca ekuHambaneni no
Abalandeli bafumanisa umtshato we-'Tiger King 'kaJoe Exotic womtshato we-YouTube
Umkhuluwa kaDa'Vonne Rogers ugxeka uDavid Alexander
'Umzalwana Omkhulu' Uqhushumbe Ngokungabhengezi Amagqabantshintshi Endlu NgeNdlu
I-Emily Seawright Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, i-Wiki
Ngaba uCody Rigsby utshatile? Ngaba Unaye Umntu Ekusebenzisana Naye?
Ukulinganiswa kweTV ngolwesiBini, nge-25 kaMeyi: 'I-NCIS' yeXesha le-18 lokuGqibela [Spoiler] Amagqabi
I-CEO yeDisney: Idili elandelayo yamalungelo eTV yeNFL kufuneka 'Yenze Ingqondo' yabanini zabelo
UParis Hilton ophantsi kwe-IVF, ufuna umntwana onesoka uCarter Reum
Umama weNkosana uPhilip wasindisa amaJuda ngexesha le-WWII, oodade batshata amaNazi
I-Powerpuff Girls Live-Action Pilot kwi-CW ukuze baphinde basebenze
Ngaba ii-irs zivaliwe ngosuku loomongameli
Mdala kangakanani uBob morley
I-brenda slim dallas tx
ubhuti omkhulu 17 becky
kelly ripa ubhityile
ihlawulwe malini i-vin diesel kubagcini